Al-kataa’ib oo soo bandhigtay Muuqaalka Xillibaano la dilayo.(Falanqeyn) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Al-kataa’ib oo soo bandhigtay Muuqaalka Xillibaano la dilayo.(Falanqeyn)
Last updated Jul 23, 2019 2,317 0
Muuqaal kooban oo ay baahisay mu’assasada warbaahineed ee Al-Kataa’ib oo ku hadasha afka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu soo bandhigay howlgallo ka dhacay Shabeellaha dhexe oo mid kamid ah lagu dilay xillibaano katirsan maamulka Hir Shabeelle.
Weerarkan oo dhacay 05 June 2018, ayaa xillibaanada lagu dilay waxay kala yihiin Ismaaciil Muumin iyo Daahir Mukhtaar, waxaana filimka lagu arkayaa iyagoo ku dhacaya kamiin adag, kadibna laga takhalusayo.
Sidoo kale muuqaalka waxaa lagu soo gudbinayaa ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo weeraray isbaaro ciidamada Hir Shabeelle u taallay deegaanka Qalimow, halkaas lagu kala eryay, askarna looga dilay.
Muuqaalkan oo soconaya lix daqiiqo ayaa qeyb ka ah silsiladda caanka ah ee Fasharrid bihim Man Khalfahum, oo inta badan lagu soo bandhigo howlgallo cul culus oo ay fuliyeen ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Halkan ka dhagyaso Falanqeyn Ku saabsan filimka Farasharid bihim 13